Qurxummii qabamuu dide! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooQurxummii qabamuu dide!
Qurxummii qabamuu dide!
Qalbeessaa Dhangi’aa, Bitootessa 9, 2019
Bishaanichis bifa qulqullina qabuun qophaa’e. Qurxummii sanas erga horatee as haalaan kunuunfachuudhaan horsiisuu jalqabe. Bishaan Qurxummicha qaamasaa taasifatee haalaan dahoo ta’uufiin tajaajilaa jira. Qurxummichis bishaan sana haalaan dhimma itti bahuudhaan dahoo godhatee keessa riphee jiraachuu fi kosii bishaan sanaa xureessuu yaadan dhabamsiisuu irratti fuulleeffatee hoojjete. Akka maddi bishaan sanaa Galaana ta’eefii haalaan jiraachisuufis Waaqa kadhate. Waaqis kadhaa Qurxummii kana dhaga’uun Bishaan sana galaana taasiseef. Amma galaana sana keessa riphee jiraachuu danda’e. Qurxummii galaana keessaa eenyu haa dhabamsiisuree? Galaana Qurxummii qabuttis eenyu ha dhaadaturee?
Qurxummii kiyyeessuuf sagantaan ba’e. Kunis haala aanjaawaa ta’een Opiraashinii gahaan sochiin jalqabe. Kunis hinaaffaa Galaana sanarraa ka’uun akkamitti galaanni lubbu qabeeyyii hawwatoo kanaan miidhagee of kabachiisee jiraata jechuu irraa madde. Qurxummii kana kiyyeessuufis sagantaan jalqabaa bahe. Sagantichi Qonxorii qopheessuu ture. Kanaafi sibiila hookkoo qopheessanii toora lagaa sana deeman. Qonxorii sanatti soorrata Qurxummii waraansisanii bishaanitti darbachuuf gara galaanaa kanattis dhiyaatan.
Galaanichi shira diinaa kana dhaga’uun dursee Qurxummiisaa soorrachuudhaan, wantoota soorrata Qurxummii ta’aan daddaffiin bakka biraa dhiibee fiduun dafee quubsate. Gaafa kiyyoon Qonxorii galaanichatti darbatamu Qurxummichi quufee waan jiruuf gara Qabbana bishaanii lafa dahoo isaatii galeera. Warri Opirashinii sana qindeessaan Qurxummicha qabanii badhaasa garaa garaa mummee Ministeeraa isaanii fi kaan biraa argachuuf dharraa’an illee milkii dhabuu danda’aan.
Shirri Qurxummii kana galaanaan ala gochuu ka duraa fashalus ammas Marroo dabalataa Summeessuun galaanicha keessaa dhabamsiisuuf saganteeffame. Malli Qurxummii qabuu inni kun ka lammataa ta’ee hojiitti seename.
Koreen dhimma kana mijeessuus maallaqa hedduun bobba’ee gara galaana manaatti argamuun summii galaanichatti naquudhaan Qurxummii dhabamsiisuuf qajeelan. Dubbiin kun dursee Qurxummii sana dhaqaabe. Qurxummichis Galaana sanaan qabatee galaana biraatti darbuun ammas gaafa summiin sun bishaanitti nam’u Qurxummichi bakkicha lakkisee eege. Akka summiin sun darbuufis walgaa bishaanotaa sanaan qabatee gara cooree sanatti maqee dabarse. Qurxummii riphe jiraatu ta’uusaas mirkaneesse. Yaaliin kun gaafa project ta’ee bahu akka waan Qurxummii kana bakkaan gahatanii abdii guutuun kan hojjetame ture. Kun hundi gaafa harkaa fashalaa’u hedduu rifachuunis hinoolle.
Marsaa sadaffaa Qurxummii kiyyeessuu. Marsaa sadaffaa irratti ammas yaalii Qurxummii sana kiyyeessuu hedduun jalqabe. Kanaan ammoo Raacha fira Qurxummii fakkeessanii dhiyeessuun saganteeffame. Qaamotni dalagaa kana galmaan gahanis qophaa’anii hojiitti bobbaa’an. Raachis fakkaatee sossobbaaf dhiyaate. Nagaa fakkaatees itti dhiyaatee akka Qurxummiin kun galaanicha keessaa bahuuf asaasa jalqabe. Asaasa sanas guddisee akka namuu dhaga’utti wacuu jalqbe. Ammas Shira sana hubachuudhaan waca raachaan Qurxummichi galaana isaa kana dhiisee bahuu hindandeenye. Ta’us Raachi ganamaa galgala iyyitu Qurxummii taatiree, kabajamaaf miidhagaan Qurxummii Raacha wacu ta’aaree?
Qurxummichi Adda Bilisummaa Oromoo ti. Galaanni uummata Oromoo yoo ta’u isaa hubataa dubbifte taanan ati jabaadha. Qurxummichi hinqabamu, hindhabamus.